Iimpawu kunye nokukhangelwa kwamanqaku kumxholo:ubunzululwazi bekhompyutha
2021-05-04 Ubunzululwazi ...
Ukuba ukhuphele nayiphi na imifanekiso okanye iividiyo kwiifayile zakho zokusebenza kwi-iPhone yakho okanye kwi-iPad, usenokuzibuza ukuba ungazikopa na kwithala leencwadi. Impendulo ngu-ewe, kwaye siza kukubonisa ukuba ungayenza kanjani: Kuqala, vula usetyenziso lweefayile kwaye uhambe uye kwifolda
Ungawutshintsha njani nawuphi na umlinganiswa onamagama amatsha kwiNotepad ++
Ukuba unoluhlu lwamaxabiso kwifayile yokubhaliweyo eyahlulwe ngumlinganiswa (njenge-comma okanye ityhubhu) kodwa ukhetha ukuba nento nganye kumgca wayo, ungenza uguquko lomgca omtsha ngokuzenzekelayo kwi-Notepad ++. Nantsi indlela. Guqula naluphi na uphawu lube ngumgca omtsha ngeNotepad ++ Notepad +
Ungayicima njani inethiwekhi ka-Apple Fumana uMy kwi-iPhone, i-iPad kunye neMac
Inethiwekhi ye-Apple ethi "Fumana uMy" yenza ukuba abanini bezixhobo ze-Apple bakwazi ukufumana ii-AirTags kunye nezinye izixhobo ezilahlekileyo besebenzisa amakhulu ezixhobo ze-Apple esele zikhona emhlabeni. Nangona inethiwekhi ingaziwa kwaye ibhalwe ngokufihliweyo, usenokubhalisa kwi-iPhone yakho,
I-Samsung Odyssey G5 kunye nee-intshi ezingama-34 ziyehla ukuya kwi- € 449 nje
2021-05-03 Ubunzululwazi ...
Izikrini ezinkulu ziyathandwa ngakumbi kwaye zinokuthatha indawo yesikrini esiphindwe kabini sesiko, siluncedo kakhulu kwi-automation yeofisi. Ngaphezulu kwako konke, ungadlala isihloko samva nje kwisisombululo esikhulu kakhulu, ukubonelela ngokucwiliswa okungcono. Ngokwesiqhelo idweliswe kwii-euro
I-Apple i-HomePod mini sisithethi esincinci esikhaliphileyo nesipakisha ingqindi. Ukuba awunazo izithethi ezinikezelweyo kwiMac yakho, inokusebenza njengesithethi esifanelekileyo kumculo nakwiimuvi. Nantsi indlela yokusebenzisa i-MiniPod mini nge-Mac yakho, kodwa isithethi se-AirPlay sisithethi esin